Mpanamboatra mahazatra, mpamatsy - China Casual Factory
Sneakers amin'ny lamaody
Kiraro lehilahy tsotra miaraka amina endrika tsotra tena hoditra ...
Ireo mpanamboatra kalitao tsara dia manaparitaka endrika vaovao hikin ...
Ny lohataona 2020 kiraro vehivavy vaovao miloko mifanaraka amin'ny ...
farany avo lenta fofonaina insole malefaka malefaka ou ...
Akanjo fahavaratra fahavaratra fararano fararano amin'ny lehilahy vaovao ...
Ny kiraro mahazatra mahazatra tsy miovaova ho an'ny lehilahy lig ...
Kaosin-damban-dehilahy toa ny kiraro, lehilahy afaka miaina ...
Fanatanjahantena filoham-pirenena an-tendrombohitra an-tampon-tendrombohitra farany avo indrindra ...
Kiraro fanatanjahan-tena mora namboarina kiraro mihazakazaka cla ...
Mpivarotra tampony Amazon amin'ny kiraro ho an'ny lehilahy fotsy kiraro ...
Kiraro lehilahy mahazatra miaraka amina endrika tsotra kiraro fampiononana ambony hoditra
Ny fijery milamina sy ny fahatsapana ny kiraro dia mamela anao hijery ny filanao sy hiaina toerana vaovao miaraka amin'ny fahatokisan-tena fa hifanaraka amin'ny toe-javatra rehetra ny tongotrao.
Akanjo miloko vaovao nosasana canvas vita amin'ny lamba madio ho an'ny tanora tanora
Misy loko mitambatra 3
Vanim-potoana: ho an'ny vanim-potoana rehetra
Tokana vita amin'ny fingotra maharitra
Ny kiraro mahazatra mahazatra tsy miovaova farany ho an'ny lehilahy fananganana ligthtweight ho an'ny akanjo isan'andro
Ity no sneaker mahazatra mahazatra amin'ny akanjo isan'andro. Uppers hoditra sy lamba lamba. Fanakatonana lace-up ho an'ny fanao mahazatra. Fonosana lamba malefaka. Tsivalana azo zahana, azo zakaina amin'ny tongotra. Exterior EVA maivana nefa maharitra. Fampahalalana momba ny vokatra Andininy: 5005 Anaran'ny vokatra: kiraro mihazakazaka ho an'ny lehilahy fitaovam-pandrefesana ambony: fitaovana enti-manja: akanjo vita amin'ny omby: lamba firakotra: haben'ny lehilahy: 41-46 vanim-potoana: fahavaratra, lohataona MOQ: tsiroaroa 500 isaky ny loko OEM / ODM: eny Logo: arakaraka ny fepetra takiana Ampiasao sy hivelomana ...
Kiraro lehilahy fialamboly miaraka amina fitaovana malefaka famolavolana ambony novokarin'ny orinasa mpanao kiraro matihanina
Miomàna amin'ny faran'ny herinandro mavitrika miaraka amin'ny kiraro tarehy hoditra tsara tarehy Series Series Dress. Ireo kiraro ireo dia manana endrika tsy mahazatra amin'ny kiraro akanjo sy ny fampiononana maivana an'ny kiraro. Classics tena ilaina sy maoderina hitafy amin'ny pataloha ankafizinao, khakis ary jeans. Mpanamboatra hoditra tena izy. Mpiambina rano sy tady revolisionera izay mandroaka avy hatrany ny rano ka tsy mila miahiahy momba ny fandrobana na tasy ianao. Fanidiana ny lace-up ho an'ny mety azo ovaina. Fihodinana avo mihandrona avo ho an'ny exc ...
Ambongadiny Lehilahy Kanvas Lamba Fampaherezana Kiraro Maody Sneakers mahazatra
Ho mora ny ho voafafa amin'ny fomba amoron-dranomasina tsara amin'ny kiraro sambo nosasana. Ampahany amin'ny fanangonana vanim-potoana vaovao. Canvas ambony misy voasasa vita. Famolavolana slip-miaraka amin'ny safidy lace-up. Mpiaro ranjo mihidy Ny fanamboarana simenitra dia manome fifamatorana azo antoka eo amin'ny ambony sy ny ivelany. Volom-borona maivana ho an'ny fampiononana manodidina ny tongotra. Ny kapila fitadidy azo esorina dia manome fampiononana maivana sy fanohanana ny andohalambo. Ny outsole EVA maharitra dia manome tanjaka tsara. Fampahalalana momba ny vokatra ...
Kiraro avo lenta kiraro mahazatra Model vaovao lehilahy mpanamboatra kiraro mahazatra
Manampia zava-manitra kely amin'ny fombanao miaraka amin'ity fomba mahazatra ity. Kiraro mahazatra miaraka amin'ny silhouette mpihazakazaka nolovaina aingam-panahy avy amin'ny làlan-kaleha avo lenta tamin'ny taona 70. Fitaovana avo lenta an'ny fitaovana PU. Fanidiana ny dantelina nentim-paharazana ho an'ny mendrika indrindra. Ny vozon'akanjo sy ny lela somary maivana dia manome akanjo milamina sy milamina. Fonosana lamba misy fehin-kodiarana mba hahazoana fampiononana. Outsole EVA mombamomba azy ho an'ny akanjo maharitra. Fampahalalana momba ny vokatra Article No. .: 5014 Anaran'ny vokatra: kiraro mahazatra mahazatra modely novokarin'i ...
2020 New design endrika mahazatra an-tsekoly lamaody lava kiraro jogging kiraro jogging
Ny Low Top Sneaker dia maivana ary vita amin'ny harato miaina miaraka amin'ny hoditra faux. Ny lace-up dia misy rantsan-tongotra manamafy sy outsole vita malefaka. Fanaronana harato sy fehin-kodiarana ho an'ny fampiononana tsara indrindra. Fampahalalana momba ny vokatra Andininy: 5007 Anaran'ny vokatra: unisex endrika vaovao haingam-pandeha haingon-kiraro jogging maivana Fitaovana ambony: faux hoditra, harato Fitaovana manarona: harato Miralenta: lehilahy Size: 41-46 vanim-potoana: lohataona, lohataona MOQ: mpivady 600 isaky ny loko OEM / ODM : eny Logo: arakaraka ny zavatra takiana aminao fonosana sy Deliv ...
Akanjo fahavaratra fahavaratra lehilahy vaovao lava-Up microfiber hoditra kiraro mahazatra kiraro kiraro ho an'ny lehilahy Ririnina kiraro ho an'ny lehilahy
Noheverina ho tanteraka amin'ny hazakazaka teknika mandritra ny taona 80, ny kiraro dia miverina miverina matanjaka miaraka amin'ny fanaingoana maoderina izay azo antoka fa hampifaly ny antitra sy ny tanora! Sneakers ambany ambany amin'ny silhouette tsy misy fangarony miaraka amin'ny hoditra sentetika. Varavaram-bonika sy lela somary maivana ho an'ny fampiononana, mety sy mahatsapa. Fitaovana lamba misy fehiloha misy tongony. Fanakatonana dantelina nentim-paharazana ho an'ny fitoviana azo antoka. Phylon tokana dia manome cushioning ary manampy malefaka. Fampahalalana momba ny vokatra Article No. .: 5022 Product nam ...
farany avo lenta avo insole malefaka malefaka outsole lamba kiraro ambony kiraro ho an'ny lehilahy
Manampia famolavolana mpihazakazaka tranainy amin'ny fitafianao miaraka amin'ny aloky ny kiraro kiraro vaovao. Kiraro mahazatra miaraka amin'ny hoditra sentetika sy lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba silhouette. Vozon'akanjo sy lela vita amin'ny rojo. Ny lambam-pandriana malefaka sy ny insole foam azo esorina dia manome fampiononana mandritra ny andro. Fanidiana ny dantelina nentim-paharazana. Outsole matevina maharitra. Fampahalalana momba ny vokatra Andininy: 5016 Anaran'ny vokatra: lamba vita amin'ny lamaody avo lenta vaovao kiraro mahazatra: fitaovana ambony: hoditra sentetika, lamba vita amin'ny lamba fanontana ...
Adiresy:No. 618 Chonghong Street, faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Quanzhou, faritanin'i Fujian.